Dibadbaxyo lagaga soo horjeedo sharci cusub oo keenaya in 3 meelod hal meel garsoorasyaasha Maxkamadda Sare ee dalka Poland ay xilka ka dagaan ayaa ka dhacay magaalada Warsaw.
Mroawiecki ayaa sheegay in isbeddel dhinaca caddaaladda ah loo baahan yahay, caddaaladuna waa inay noqotaa, buu yiri, mid shacabka Poland ay la xisaabtami karaan.
Beddelidda da’da hawgalka ayuu ku sheegay in dastuurka ay waafaqsan tahay. Dalalka kale ee xubnaha ka ah midowga Yurub ayuu ku eedeeyey in ay olole ku hayaan dawladda uu shacabku soo doortay ee Poland.
Hase yeeshee, hogaamiyeyaahsa Midowga Yurub ayaa arrintan diiday, iyaga oo sheegay in dimqoraadiyadda dalka Poland ay khatar ku jirto, isla markaana xukuumadda midigta jirta ku eedeeyey inay doonayso inay gacanta ku dhigto maxkamadaha.